6 arimood oo aad ku kicin karto dareenka kacsiga gacalisadaada | Raganimo University
6 arimood oo aad ku kicin karto dareenka kacsiga gacalisadaada
Lamaane baddan ayaa dhib ku qaba in ay kiciyaan dareenka ka dhexeeya inta aysan sariirta wada tagin, iyadoo galmada ay noqotay oo keliya waxay iska sameeyaan. Hadaba ragoow iyo dumaroow sidee u kicin kartaa dareenka seygaaga ama gacalisadaada? Talooyinkaan hoose ayaa kaa caawin doona in aad sariirta wada tagtaan idinka oo u xiiso qaba.
1. Sheekada sii bilow inta aadan guriga tagin
Waxaad sheekada iyo dareen kicinta sii bilaabi kartaa inta aadan guriga tagin adiga oo wacaya ama message u diraya gabadha ama wiilka oo hadalo macaan oo sarbeeb ah ku dhahaya oo u muujinaya in aad xiiso u qabto jirkeeda iyo kulankeeda.
Labisku qeyb ayuu ka qaataa kicinta dareenka. Xaaskaaga ama seygaaga u xiro dhar soo jiidasho leh oo muujinaya quruxdaada. Waliba haddaa guriga kaligiin ku tihiin xiro dhar qafiif ah oo jirkaaga qeyb ka muujinaya. Ninka waxaa laga doonayaa in uu gabadha ku amaano labiska qurxoon, isagoo dhahaya erayo muujinaya in uu dareemay quruxda iyo isbedalka dharka.
3. Xiriirka indhaha iyo codka hoose
Indhihu qeyb weyn ayay ka qaataan kicinta dareenka qofka. Marka aad qofka indhaha toos uga fiiriso waxaad ka akhrisan kartaa dareenkoodu sida uu yahay. Marka aad gabadha la sheekeysanayso indhaha toos uga fiiri oo indhahaaga iyo mideeda waa in ay is qabtaan. Waliba adiga oo cod hoose oo macaan kula sheekaysanaya. Codka sare waa dilaa dareenka. Mowduuc kasta oo aad ka hadlayso codkaaga hoos u dhig adiga oo gabadha indhaha ka eegaya.
4. Muuji dareenkaaga
Ha kala xishoon gabadha dareenkaaga iyo waxa aad damacsantahay oo kula hadal erayo macaan oo galmada xitaa la xiriira. Xitaa ugu goodi sida aad yeeli doonto iyo casharka aad u dhigi doonto marka aad sariirta wada tagtaan. U muuji in aad kacsi badan u qabto oo aad iscelin la'dahay. Dumarku waa ku kacsadaan marka ay ogaadaan in baahi loo qabo jirkooda.
Degdegu dareenka waa dilaa. Noqo nin degan oo aan orod ku jirin. Sheekada waqti ku qaado, yaysan dareemin in aad horey sariirta kula carareyso. Waxaa la rabaa in aad gaadho xili iyadu ay dooneyso in aad kaxayso oo ay iscelin la'dahay.
6. Jirkiinu ha is taabto
Marka aad sheekada bilaabayso horta waa in aad fariisataa meel ku dhow gabadha oo jirkiinu istaaban karo. Inta sheekada macaan idin socoto isku day in aad gacantaada saarto lugteeda adigo oo aan hoos u dhaadhacayn. Marka sheekadu gabagabo idin mareyso oo aad hubsato in dareenkeedu soo kacayo isku day in aad shumiso. Marka aad shumiso oo jirkiinu si fiican isku taabto isticmaal gacmahaaga in aad ku salaaxdo qeybaha kale ee jirkeeda. Laakiin haku degdegin in aad naasaha ama hoos aad ugu dhaadhacdo waayo qeybahaas waxaa la rabaa in aad ka dhigto qeybta ugu dambeysa inta aadan sariirta geyn.